Ma u malaynaysaa , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Maryan iyo Maarta ma aysan aqoon waxay ka maleeyaan Ciise markii uu yimid magaaladooda afar maalmood ka dib aaskii Laasaros. Markii xanuunkii walaalkood ka sii darey, waxay u soo direen Ciise, kaasoo ay garanayeen inuu daaweyn karo. Waxay u maleeyeen inuu isagu saaxiibo dhow la ahaa Laasaros, Ciise wuu u imaan doonaa isaga wax walbana si wanaagsan ayuu u samayn doonaa. Laakiin ma uusan. Waxay umuuqatay inuu Ciise qabtay waxyaalo badan oo muhiim ah inuu sameeyo. Sidaas buu ku sii joogsaday meeshuu joogay. Wuxuu xertiisii ​​u sheegay in Laasaros hurdo uu jiifa. Waxay u maleeyeen inuusan fahmin in Laasaros dhintay. Sidii caadiga ahayd, waxay ahaayeen kuwa aan fahmin.
Markii Ciise iyo xertii ugu dambeyntii yimaadeen Beytaniya, oo ay walaalo iyo walaalkii ku noolaayeen, ayaa Marta u sheegtay Ciise in jirka walaalkeed uu durba bilaabay inuu bogo. Way ka xumaadeen inay ku eedeeyeen Ciise inuu muddo dheer sugayay si uu u caawiyo saaxiibkiis jiran.
Aniguba sidoo kale waan niyad jabi lahaa - ama, si ku habboon, jahwareer, xanaaq, cabsi badan, quus - miyaanad ahayn? Muxuu Ciise ugu ogolaaday walaalkeed inuu dhinto? Sabab? Had iyo jeer waxaan isla weydiinaa isla su’aasha maanta - Muxuu Eebbe u daayay kuwa aan jeclahay inay dhintaan? Muxuu u oggolaaday tan ama masiibadaas? Hadey jawaabtu jirin, waxaan caro uga leexanay Ilaah.
Laakiin Maria iyo Marta in kasta oo ay niyad jabeen, xanaaqeen, iyo in yar oo xanaaqsan, kama leexan. Erayadii Ciise ee ku jiray Yooxanaa 11 ayaa ku filnaaday in ay Maryan u xaqiijiso. Ilmadiisa ku jirta aayadda 35-aad Maria waxay muujisay sida ay xiiseyneysay.
Waa ereyo isku mid ah oo dejiya oo dejinaya maanta markii aan u diyaar garoobayay laba munaasabadood, in aan u dabaaldego dhalashadii ugu horreysay iyo Axaddii Easter-ka, sarakicidda Ciise. Yooxanaa 11,25, Ciise ma oran, "Ha welwelin, Marta, waxaan soo sara kicin doonaa Laasaros." Wuxuu ku yidhi: "Anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha. Qofkii i rumaystaa wuu noolaan doonaa xitaa inuu dhinto ”.
Anigu waxaan ahay sarakicidda. Erayo adag. Sidee ayuu ku dhihi karaa arrintaas? Awooddee ayuu naftiisa naftiisa ku dili karaa oo ku soo celin karaa? (Matayos 26,61). Waan ognahay waxa ay Maria, Marta, Laasaros iyo xertii aysan aqoonin, laakiin markii dambe la ogaadey: Ciise inuu Ilaah yahay, Ilaah waligiis buu ahaanayaa. Kaliya isaga awood uma leh inuu soo sara kiciyo dadka dhintay, laakiin waa sarakicidda. Taas macnaheedu waa isagu waa nolosha. Noloshu waxay ku dhexjirtaa xagga Ilaah oo waxay sharraxaysaa dabeecadiisa. Taasi waa sababta uu isagu isu yiraahdo: WAAN ahay.
Dhalashoyda soo socota ayaa i siisay sabab aan uga fekero nolosha, dhimashada iyo waxa dhaca kadib. Markii aan aqriyay ereyada Ciise Marta yiri, waxaan ula jeedaa inuu iweydiinayo isla su’aal. Miyaad u malaynaysaa inaan aaminsanahay inuu yahay sarakicidda iyo nolosha? Waxaan u maleynayaa inaan dib u noolaan doono inkasta oo aan ogahay inay tahay inaan dhinto sida dadka kale oo dhan sababtoo ah waxaan aaminsanahay Ciise? Haa, waan sameeyaa. Sideen ugu raaxaysan karaa waqtiga haray haddii aanan ka helin?
Maxaa yeelay Ciise noloshiisa wuu bixiyay oo mar labaad wuu aqbalay, maxaa yeelay xabaashu way madhnayd oo Masiixu dib buu u soo noolaaday, waan soo noolaanayaa. Ciid wanaagsan oo aniga ii ah dhalasho faraxsan!